Umhlahlandlela weNobob Wokukhangisa Ku-inthanethi | Martech Zone
NgoLwesine, Septhemba 29, 2011 NgoLwesine, ngo-Okthoba 27, 2011 Douglas Karr
Yize le infographic isho ukuthi iyi- noob umhlahlandlela, empeleni kubhekisisa kahle amasu abandakanyekile ekwakheni isu lokukhangisa elingenayo online. Iziteshi ezichazwe zifaka phakathi ukumaketha kwe-imeyili, ukukhiqizwa okuholayo, ukusesha okuphilayo, ukusesha okukhokhelwayo, imithombo yezokuxhumana, ukwenza kahle kanye analytics. I-infographic iyamangalisa - futhi uhlu olukhulu lokuhlola kubo bonke abathengisi abaku-inthanethi.
Ukwamukelwa okusobala okuvela ku-infographic kuyisu lobudlelwano nomphakathi. Ukhiye wesisekelo sanoma yikuphi ukutholakala okuhle kwe-inthanethi wukuqashelwa ontanga yakho. Amafemu obudlelwano bomphakathi afana nathi, I-Dittoe PR, bangamakhosi ekutholeni amathuba ngezincwadi ezibalulekile nobuntu.
Unbounce - Ipulatifomu lekhasi le-DIY Landing
I-infographic yathuthukiswa ngu Ungavumeli. I-Unbounce iyisevisi ezisebenzele yona ehlinzeka abathengisi abenza ukusesha okukhokhelwayo, izikhangiso ze-banner, i-imeyili noma ukumaketha imithombo yezokuxhumana, indlela elula yokwakha, ukushicilela nokuhlola ukukhuthazwa kwamakhasi wokufika ngaphandle kwesidingo se-IT noma abathuthukisi.
I-Facebook yi-Frat House, i-Google + iyisilonda
Okthoba 1, 2011 ngo-10: 34 AM
Enye ye-inforgraphic enhle engiyibonile ezikhathini zamuva. Imininingwane emangazayo efakwe ku-infographic eyodwa, izigqoko kumqambi.
Okthoba 1, 2011 ngo-10: 48 AM
Ngangicabanga okufanayo, Robert! Yize ngifisa ukuthi kube nezindlela zokuyenza ifundeke ngosayizi omncane.
Okthoba 2, 2011 ngo-7: 37 AM
Umdwebo omangalisayo! Ngifuna ukuhamba wonke amaklayenti ngezinyathelo! Indlela ephefumulelwe yokubuka konke okudingekayo ukukhahlela ukuqala ukucindezela komphakathi.